Vaovao - marika sy marika famantarana ny firaka zinc
Ny firaka zinc dia fitaovana marobe kokoa tsy misy fetrany, raha oharina amin'ny tsimatra enamel varahina, marika & marika ny firaka zinc dia tena lafo tokoa, indrindra fa rehefa be ny kaonty na lehibe ny haben'ny pin. Ho an'ny mari-pamantarana firaka zinc dia mety ho mahia kely kokoa noho ny lanjany. Afaka manao badge zinc zinc isika miaraka amin'ny lanjany latsaky ny 1kg. Amin'ny alàlan'ny fampiasana tsindrona tsindrona ny fampiasana firaka zinc, rehefa manana endrika tapaka ao anatiny ny famolavolana, ny firaka zinc no safidy tsara indrindra raha tsy misy maty tapaka. Raha ireo tsimatra varahina ireo, tsimatra vy, tsimatra vita pirinty misy sary nohetezana anatiny na faritra malalaka dia azo atao ihany izany raha ilaina izany. Ankoatry ny fanapahana pin, ny casting casting zinc dia koa effet 3D feno tsara hanehoana fanamaivanana na cubic bebe kokoa noho ny varahina na vy voahidy. Ny safidy tokana dia afaka maneho tanteraka ny volavola kely.
Loko: enamel henjana sarotra, enamel malemy na tsy feno loko
Tabilao loko: Boky Pantone
Vita: volamena mamy / matte / antitra / nikela
Fonosana: kitapo poly / karatra taratasy natsofoka / boaty plastika / boaty volory / boaty taratasy
Raha raisina ny tombam-bidy ambany ambany dia misy fetrany maromaro amin'ny tsimatra firaka zinc, vola madinika, medaly.
** Ny plating varahina fahagola dia tsy misy amin'ny famaranana enamel mafy vita amin'ny firaka zinc
** Tsy vita amin'ny firaka zinc ny famaranana plastika fahagola + manjelanjelatra
** Ny enamel sarotra entina tsy misy fitoraham-bato & enamel malefaka dia tsy azo alaina ho an'ny vokatra firaka zinc vita amin'ny zinc amin'ny loko mangarahara
** Raha tokony hividianana sandblasting dia mampiasa gritty # 2 & zavona
Pretty Shiny Gift dia matihanina namboarina namboarina mpanamboatra, mamokatra karazana pints isan-karazany amin'ny firaka zinc izahay, varahina, varahina, vy, vy tsy misy fangarony, alimo ary volafotsy manify. Aza misalasala mandefa mailaka ny volavolanaosales@sjjgifts.com. Raha vantany vao voaray ny volanao manokana, ny varotra matihanina anay dia hanome sosokevitra ho an'ny mpanjifa hatrany amin'ny endrik'izy ireo sy ny kendreny ary hamerina anao ireo badge de pin tsara.